မေလ ၁၁ရက်နေ့မှစတင်၍ ကညနရုံးများတွင် ကနဦးမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးမည်
မော်တော်ယာဉ်အသစ်များအတွက် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် ဝန်ကြီးဌာန၂ခုသို့ တင်ပြထား
Suzuki Motor Corp will invest “several billion yen” to buildasecond auto plant in Myanmar inabid to make quick inroads into the country’s booming auto market,areport said. Japan’s Nikkei business daily reported that the company has secureda20-hectare plot at the Japanese-backed Thilawa special...
မော်တော်ယာဉ်အသစ်များအတွက် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများကို ကနဉီးအနေဖြင့် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ၀န်ကြီးဌာန ၂ခုသို့ ဧပြီလ ၂၇ရက်နေ့တွင် တင်ပြထားကြောင်း မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သိရသည်။ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနအပြင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ပါ တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။ COVID 19 ရောဂါမှာ ပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားရသော်လည်း လူထုကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမရှိစေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် ယခုကဲ့သို့ တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၀န်ကြီးဌာနများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုမည်ဆိုပါက မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် မော်တော်ယာဉ် နံပတ်ယူခြင်း၊ ငွေပေးသွင်းခြင်းနှင့် အခြားသောကိစ္စရပ်များကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု...
Japanese automaker Suzuki Motor Corp donated 100 police motorcycles to the Myanmar government last week to help the country’s police force in maintaining law and order. The motorbikes will be used as security vehicles for ASEAN leaders who will attend the ASEAN summit next year, and to control law and...
Audi Yangon to Offer the Latest from German Luxury Carmaker
Audi Yangon to Offer the Latest from German Luxury Carmaker Audi importer and distributor Automotive Asia (Myanmar) Limited is building an official sales and service center onaprime site in front of Inya Lake in Myanmar’s commercial capital. As the first official Audi dealership in the country, Audi Yangon...
Part of Rakhine State regains internet access after one year
English text below ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်ကာ အင်တာနက်လိုင်းများ ပိတ်ထားခံရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မြို့နယ်များအနက် မောင်တောမြို့နယ်ကို မေလ ၂ရက်နေ့တွင် အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့် ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် COVID 19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပိတ်ထားသည့် မြို့နယ်များအနက်မှ စစ်ရေးအရ ထိခိုက်မှုနည်းပါးသည့် မြို့နယ်ကိုသာ ပြန်လည်ဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားသော မြို့နယ်များကို ယခင်အတိုင်း အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားသည့် အခြားမြို့နယ်များအနေဖြင့် ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများမှ စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ လိုက်လံ...
ယခုလ ၁၁ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(က.ည.န) ရုံးများ ပြန်ဖွင့်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်များအရ က.ည.နရုံးများတွင် ကနဦး မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း က.ည.န က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ က.ည.န မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကနဦး မှတ်ပုံတင် ၀န်ဆောင်မှုကို နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ထောက်ကြန့်နှင့် ရွာသာကြီး ရုံးများတွင် ၀န်ဆောင်မှု စတင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မော်တော်ယာဉ်များ ကနဦး မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယာဉ်ထုတ်ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးကို ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ၀န်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်းထားသည့် မတ်လ ၂၆ရက်နေ့မှ မေလ ၁၀ရက်နေ့အထိ ၄၆ရက်စာ ထည့်သွင်းကောက်ခံမည်မဟုတ်ဟု ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် နေပြည်တော်တွင်လည်း မတ်လ ၃၀ရက်နေ့မှ...